Universal Dual USB TF Card FM Transmitter Bluetooth Car Charger Charger
fur Type Black Silver
Universal Dual USB TF Card FM Transmitter Bluetooth Car Charger Charger - Madow gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Ugu badnaan Awoodda wax soo saarka: 10W
Shahaadada Tayada: CE, FCC
Hab maamuuska Degdegga ah ee La Adeegsaday: Taageero Ma Leh
Is-dhexgalka wax soo saarka: 2 A Ports
Lambarka Moodalka: LC01
Magaca badeecada: FM gudbiye Bluetooth Car Charger
Waxqabadka: Xeedho baabuur, 3.4A xukun deg deg ah, xeedho USB ah, gudbiye FM, qalabka wax lagu dhejiyo ee Bluetooth, Muuqaalka Bataatiga Battery, Mashiinka Gawaarida Gawaarida badan ee Bluetooth
Taageero: Kaarka TF, Awoodda diskiga U ilaa 32G, Gawaarida MP3 MPXNUMX, qalabka maqalka, qalabka maqalka ee Bluetooth
Taageer wicitaan gacmo-la'aan ah Bluetooth
Noocyada Faylka Codka lagu taageerayo: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, iyo Foomamka Kale ee Hi-fi
Maxay Buuq u Jirtaa?
Marka gaariga FM-ka uu saameeyo kanaalka idaacadaha kale, wuxuu soo saari doonaa buuq. Waxay u baahan tahay in lagu hagaajiyo kanaalka iyada oo aan raadiyaha la soo faragelin, dhawaquna waa yar yahay intii suurtogal ah. Ka dib ku xir gaariga gaariga Bluetooth-ga ah oo muusig garaac si aad ugu raaxeysato tayada dhawaqa qeexitaanka-sare.
Double USB ku dallacaya
Jihada / muusikada la ciyaaro
U disk / TF kaarka loo maqli karo
Si ballaadhan oo la jaan qaadaya
Qeybinta caqliga ee awoodsiinta hadda: waxay si dhakhso leh u soo rogtaa laba qalab isla waqti isku mid ah
Hal-Taabasho Gacmo-Bilaash ah:
Waxay taageertaa wicitaanka taleefanka gacanta ee bilaashka ah markaad ku xirmayso telefoonka adoo adeegsanaya Bluetooth
Jawaab / laalitaan
Guji si aad uga jawaabto / saxaafadda dheer u diido
Khadka lambarka ugu dambeeya taariikhda wicitaanka
Marka labaad waxaan dalbanayaa adabtaradan. Waa markii ugu horeysay ee ninkeeda, hadana hadiyad ahaan loo siiyo wiilka damiirka ah. Ninka gaariga saaran sifiican ayuu u shaqeeyaa, waxaan ka dhageysaneynaa muusikada mobilka iyadoo loo marayo afafka Autoradio. Aad ayey u fiicantahay inay jirto tilmaam loogu talagalay Ruushka. Adapter iyo Autoradio waa la hubaa inay isla mowjad isku mid ah dhigayaan, waxaan haynaa tan 87,5 ka dibna waxay ku xirmi kartaa Bluetooth-ka mobilka, waxaad u baahan tahay inaad doorato 010. Codku wuu fiican yahay, faragelin la'aan iyo kala go 'la'aan. Goor dambe ayaan isla naftayda iibsan doonaa inta gaadhigu dayactirka ku socdo. Adabtarada ayaa wanaagsan oo fududahay in la isticmaalo, waxaan kugula talinayaa.
Alaabada quruxda badan, waan ku faraxsanahay